"Chinese Electricity Weekly": Beijing Global Resort with Tencent နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး "The Hero League of the Field of the Field of the - Pandaily
Categories: ကဏ်ဍ ခှဲမထား ကိုDi Ma ဖေ‌ဖျောဝါရီ 13, 2021 မှာ Posted
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ နိုင်ငံတွင်း လျှပ်စစ်ယှဉ်ပြိုင်သည့် လုပ်ငန်းမှာ နှေးကွေးလာခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသောကြောင့် ကုမ္ပဏီအများစုက အလုပ်သမားများကို အိမ်ပြန်ခွင့်ပြုကာ ဆင်နွှဲကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ကျွန်တော်တို့သည် အားတက်ဖွယ်ရာနှင့် အဓိကကျသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပေါင်းများစွာကို တွေ့မြင်နေရဆဲဖြစ်သည်။
Tencent: Tencent Game Intellectual Property (IP) ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ စတင်ကျင်းပမယ့် Beijing Globe Resort (BUR) ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှု အတွေ့အကြုံများ; Great Wall Car ၏ လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သော Harvor အမှတ်တံဆိပ် ရှန်ခိုက်နှင့် Virtus. ro တို့ ပူးပေါင်း၍ သက်တမ်းတိုးခြင်း Riot Games ၏ “The Hero League: The Rising Hands” ကို တရုတ်အမျိုးသားသတင်းထုတ်ဝေရေးဌာန (NPPA) က အတည်ပြုရယူခဲ့သည်။ Oxygen Yu Silver က တရုတ်နိုင်ငံ Electricity Agency မှ Suzing Game ကို စပွန်ဆာပေးသွားရန်
Topics: မွငျကှငျးChina Electricity Weekly: TCL Sponsor Hero’s Union Professional League, China Chat Service TT Royal Tone Financing 1 Begel Finance
ပေကျင်းရှိ Universal Resort တွင် လက်တွဲပြီး Tencent ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ရာသီအလိုက်
ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်က Tencent Interactive Entertainment Group (IGE) နှင့် ဘေဂျင်းအခြေစိုက် Global Resort (BUR) ကုမ္ပဏီနှစ်ခုတို့ နှစ်ရှည်လက်တွဲကာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း ကြေညာသည်။
Tencent Wang Glory, Glory Elite, QQQ Queen Speed, Carding Game နဲ့ Botting Game တို့အပွငျ အခွားဂိမျးပေါငျးမြားစှာကို တရားဝငျထညျ့သှငျးမှာဖွဈပွီး BUR 2022 ရာသီအလိုကျ လှုပျရှားမှုတှေ ပွုလုပျမှာဖွဈပါတယျ။ ယင်းသည် Tencent နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထိပ်တန်းဆောင်ပုဒ် ပက်ခ်၏ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်သည်။ ဖွဈဖှယျရှိတဲ့ BUR က Tencent နဲ့ ပူးပေါငျးပွီး သီးသနျ့ အပွငျအဆငျနဲ့ Park IP mode အသဈထဲကို တှနျးအားတှေ ထိုးသှငျးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
“ သိပ်မကြာခင်ကာလမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဖျော်ဖြေရေး ပြကွက်တွေဟာ e-Sports တွေရဲ. ပူးပေါင်းမှုကို ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်၊ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ စိတ်ခံစားမှုကို ဖြန့်ကျက်နိုင်မှာဖြစ်သလို ပိုမိုချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး ပိုမိုဆိုးရွားတဲ့ Customer တွေရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု Tencent ၏ အကြီးတန်းဒုဥက္ကဋ္ဌ Mary Xiaomy က ကြေညာချက်တစ်ခုတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
UBR ဥက်ကဋ်ဌနှငျ့ အထှထှေမေနျနဂြော Tom Mehrmann က “ကြှနျတျောတို့ဟာ တရုတျလုပျငနျးတှမှော အစဉျတစိုကျ တိုးခြဲ့လုပျကိုငျလာကွပွီး တရုတျဧညျ့သညျတှေ ပိုမိုဆနျးသဈတဲ့ အပွငျအဆငျတှေ ဖနျတီးပွီး ပနျးခွံတှေ တညျဆောကျတာ၊ တရုတျယဉျကြေးမှု အရညျအသှေးမွငျ့ ခရီးသှားလုပျငနျးတှေ ဖှံ့ဖွိုးလာစဖေို့ ပံ့ပိုးပေးပါတယျ” ဟု ပွော သညျ။
မကြာသေးမီက အတည်ပြုခဲ့သော ပေကျင်းမြို့ ကွင်းပတ်ခ်၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် “ဒုန်းချီ” ပန်းခြံကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေလတွင် ပွဲဦးထွက် ပြသဖွယ်ရှိသည်။
Haver နှင့် ရုရှားVirtus. Pro တို့ ၂၀၂၁ တွင် လက်တွဲသက်တမ်းတိုးမည်
တရုတ်ကားကုမ္ပဏီ Great Wall Motor က ၎င်း၏ အမှတ်တံဆိပ်ကို ကြေညာခဲ့ပြီး ရုရှားအီလက်ထရွန်နစ် Sports Organization Virtus. Pro (VP) နှင့် ပူးပေါင်း၍ သက်တမ်းတိုးခဲ့သည်။
Global Automotive Corporation က Great Wall Motor ကို ၂၀၂၀ ခုနှဈမှာ ရုရှားနိုငျငံမှာ ကားအစီးရေ ၁၇၃၈၁ စီး ရောငျးခခြဲ့ပွီး ၄၁ ရာခိုငျနှုနျးအထိ မွငျ့တကျလာတယျလို့ တရုတျကားအမှတျတံဆိပျတှေ ရုရှားဈေးကှကျအတှငျး ရောငျးခမြှု ခေါငျးစဉျနဲ့ ပွောပါတယျ။
Virtus. Pro သည် ရုရှား၏ အီလက်ထရောနစ် SportsOrganization များထဲမှ အကောင်းဆုံးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး အထူးသဖြင့် Dota2နှင့် CS: GO e-Sportsလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ ·
Haffer ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလမှာ Dota2Errossa League ရဲ့ ဒုတိယမွောကျ သီးသနျ့ကားမိတျဖကျ ဖွဈပါတယျ။
“ Harvard ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေအတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ရလဒ်တွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ VP Battle Team နဲ့ မိတ်ဖက်အဖြစ် တိုးချဲ့သွားမှာပါ၊ စူးစမ်းလေ့လာမှု အရှိန်မြှင့်တဲ့အနေနဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားနယ်ပယ်မှာ ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာပါ” လို့ ရုရှားအခြေစိုက် Harvard လုပ်ငန်းခွဲရဲ့ အကြီးအကဲ Jerome Sigot (Jerome Saigot) က ပြောပါတယ်။ ·
“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်တွဲဖော် Haffer အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မနှစ်ကလက်တွဲခဲ့တဲ့ ရလဒ်တွေအတွက် ဝမ်းသာမိပါတယ်၊ Haver နဲ့ Virtus. Pro တို့ အတူတကွ လက်တွဲပြီး သူတို့ရည်မှန်းချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပျော်ရွှင်မိပါတယ်၊ လက်တွဲဖော်တိုးချဲ့ဖို့” Dota2 “ နဲ့” CS: GO “ တို့ဟာ ပရိသတ်တွေအတွက် မတူညီတဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို ဖော်ဆောင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုရလာပါလိမ့်မယ်” လို့ Virtus. Pro ရဲ့ အထွေထွေမန်နေဂျာ Sergey Glazau က သုံးသပ်ထားပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုသူရဲကောင်းများ ဖြစ်ကြပါစေ။ “အကှဲအပွဲရိုငျး” လှုပျရှားမှုကို ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ တရုတျအမြိုးသားသတငျးဖွနျ့ခြိရေးဌာန (NPPA) ရဲ့ အတညျပွုခကျြရယူခဲ့ပွီး အတညျပွုခကျြရယူနစေဉျမှာ နှငျးမုနျတိုငျးဖြျောဖွမှေုအပါအဝငျ အခွားဂိမျးပေါငျး ၃၂ ခုအပွငျ အှနျလိုငျးကနေ “Blackmout” နဲ့ Nintendo Switch ရဲ့ “Super Mario Party ” တို့ကို ရှလြေ့ားခဲ့ပါတယျ။
Chat Services Oxygen Yuyin နဲ့ China Electricity Agency တို့က Suzing Games (SN) စပှနျဆာစာခြုပျကိုလကျမှတျရေးထိုးခဲ့ပါတယျ။ ငှကွေေးအပေးအယူကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ ထုတျဖျောပွောကွားခွငျး မရှိပေ။